Nagu saabsan - Pandawill Technology Co., Ltd.
Wareegyada Pandawillwaa koox in kabadan 10 sano khibrad uleh soosaarka PCB iyo warshadaha soosaarka elektarooniga ah. Iyada oo wadarta aagga wax soo saarka ee 2,000 mitir laba jibbaaran iyo shaqaale xirfad leh oo ka sarreeya 500, waxaan awood u leenahay inaan ku siino soo saarista PCB iyo isku-darka ka soo noqoshada degdegga ah, noocyada illaa wax soo saarka mugga.
Tayada ayaa ah ahmiyadeena koowaad, waa dariiq aasaasi u ah dhinac kasta oo ka mid ah maaraynta xogta, alaabta ceyriinka ah, injineernimada, soo saarista iyo taageerada farsamo ee aan bixino. Waxaan nahay ISO9001, ISO 14001 la ansixiyay, UL la aqoonsan yahay. Dhammaan wax soo saarku waxay raacaan heerarka IPC waxayna u dhigmayaan shuruudahaaga dalabka iyo dhammaan alaabada ceyriinka ah ee la isticmaalay ayaa ka mid ah buundooyinka ugu sarreeya ee ganacsi ahaan la heli karo.
Tayada ka sokow, qiimaha marwalba waa mid ka mid ah tixgelinta ugu weyn. Adeegyadeenu waxay kuu oggolaaneysaa inaad noqoto ciyaaryahanka ugu tartamaya suuqaaga, adoo kor u qaadaya tayadaada, isla markaana kuu keenaya dhinaca qiimaha, helitaanka adeegyo takhasus leh & wax soo saar takhasus u leh waddanka qiimaha ku tartamaya. Fahamkeenna asalka ah ee dhismaha iyo burburka kharashaadka markii la sameynayo guddiga wareegga wuxuu noo oggolaanayaa inaan eegno meel ka baxsan dhaqaalaha fudud ee keydka baaxadda leh iyo inta badan saamaynta isugeynta ee dhowr dib u eegis waxay ku yeelan kartaa saameyn la yaab leh oo wanaagsan qiimaha guud. waxa aan sameyn karno si aan u yareyno kharashkaaga guddiga socdaalka ah.
Waxaan u jilicsan nahay codsiyadaada. Waxyaabaha caadiga ah ka sokow, tiknoolajiyada, waqtiga hogaaminta iwm, marwalba waxaan isku dayeynaa inaan buuxino noocyo kaladuwan oo shuruudo ah oo ka imanaya macaamiisheena ka soo jeeda nooc dhaqso ah oo dhaqso leh oo wax soo saar mug leh leh.
Waad ku mahadsantahay shaqaalaheena dadaalka badan, hada waxaan u adeegeynaa in kabadan 1000 macaamiil aduunka oo dhan. Alaabtayada iyo adeegyadeena waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha, caafimaadka, isgaarsiinta, guriga casriga ah, Internetka sheyga iyo warshadaha baabuurta. Aad ayaan ugu mahadnaqaynaa fursadda iyo kalsoonida ka timid macaamiisheena. Soo noqoshada, waxaan marwalba isku daynaa inaan noqono talaabo horay usocota macaamiisheena anaga oo cadeyneyna alaabooyin la isku halleyn karo oo ah qiimo tartan iyo waqtiga hogaanka ugu fiican Waxaan aad u rajeyneynaa inaan kula shaqeyno.